I-Calamares 2.4.4 etholakalayo, isifaki esithandwa yi-Arch-based distros | Kusuka kuLinux
I-Calamares 2.4.4 etholakalayo, isifaki esithandwa yi-Arch-based distros
Sifunde kuSoftPedia, ukuthi ngenjabulo yokuvuselelwa okusha kwe Izikhalazo, uhlaka lokufakwa kwe-linux, oluza ngokuzenzakalela kuma-distros amaningi afana neManjaros, chakra, KaOS, Apricity OS, BBQLinux, OpenMandriva phakathi kwabanye.
Uhlobo lwe I-squid 2.4.4 Iza ilayishwe ngokuthuthuka okuhlukahlukene nezici ezintsha, esilinganisela ukuthi zizotholakala kuma-distros amaningi kuzibuyekezo zazo ezilandelayo.
1 Yini iCalamares?
2 Izici ze-squid 2.4.4?
3 Landa ama-squids 2.4.4
Izikhalazo Kuyinto a Ukufakwa kohlaka kwe-Linux, umthombo ovulekile, othuthukiswe yithimba elikhulu lohlelo lasemiphakathini eyahlukahlukene. Izalwe ngenhloso yokwakha isifaki somhlaba wonke, esitholakala kunoma yikuphi ukusatshalaliswa.
Ungumnikazi a design ngezifiso kakhulu, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezahlukahlukene nokusetshenziswa kwamacala. Into yakhe eyinhloko kufanele kube lula, kube wusizo, kube kuhle, kube yipragmatic futhi kufakwe wonke umuntu.
Izikhalazo kufaka phakathi umsebenzi we ukwahlukanisa okuthuthukile, ngokusekelwa kwemisebenzi yokuhlukanisa okwenziwa ngesandla nangemishini. Isifaki sokuqala esinenketho ezenzakalelayo ku "Miselela ukwahlukanisa", okwenza kube lula ukusebenzisa ukwahlukanisa kaninginingi ukuze kuhlolwe ukusatshalaliswa.
Izici ze-squid 2.4.4?
Inguqulo ye-KPMcore 2.2 noma i-2.2.1 iyadingeka.
Landa ama-squids 2.4.4
Ikakhulukazi isifaki se-Linux distros engisithanda kakhulu, ngicabanga ukuthi sinikeza iManjaro (okuyi-distro lapho ngibe nenhlanhla yokuzama khona) ukuguquguquka okuhle kakhulu nokulula kokufakwa, okuvumela noma imuphi umsebenzisi ukuthi akhuthazwe kusukela kumzuzu wokuqala ukuzama le distro.
Uphawula uthini ngalesi sifaki? Ingabe uyisebenzisile?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Calamares 2.4.4 etholakalayo, isifaki esithandwa yi-Arch-based distros
Umhlahlandlela wokuthi umbiko kufanele usetshenziswe kanjani ungakuhle.
Yebo, umugqa wokugcina weposi lakho kufanele ube owokuqala
Kufanele ngifunde yonke i-athikili ukuze ngibone ukuthi ayisizakali kimi
Lalela umculo kusuka efwini one-terminal
Khetha noma yimuphi umbala esikrinini ngePick